ဒါတွေသိမှ Internet ကို ဖုန်းနဲ့ သုံးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒါတွေသိမှ Internet ကို ဖုန်းနဲ့ သုံးပါ
Posted by the best on Nov 27, 2012 in Copy/Paste | 27 comments
အင်တာနက်သုံးစွဲသည့် ပမာဏအလိုက် ငွေကြေးကောက်ခံမည့် စနစ်
အင်တာနက်သုံးစွဲသည့် ပမာဏအလိုက် ငွေကြေးကောက်ခံမည့် စနစ်မှာ
သိသင့်တာတွေ့ လို့ ကူးတင်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကနေ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုတွေကို data usage နဲ့ ကောက်ခံတော့မယ်ဆိုတော့ အသုံးပြုကြတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ဘာတွေကို သုံးနေပြီး ဘယ်လောက် ကုန်ကျနိုင်တယ်ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းလောက်တော့ သိထားကြဖို့ လိုပါတယ်။ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ data usage အနည်းအများဟာ အဓိကအားဖြင့်တော့ အသုံးပြုတဲ့ internet applications တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ပါတယ်။
– အင်တာနက်ကနေ မိနစ် 30 ခန့် တီဗွီကြည့်မယ်ဆိုယင် 90 MB ခန့်
– YouTube က music video တွေ4mins လောက် ကြည့်မယ်ဆိုယင် 11 MB ခန့်
– Radio apps တွေသုံးပြီး internet radio 10 mins လောက် နားထောင်ယင် 15 MB ခန့်
– Facebook ကို video streaming မပါပဲ 15 mins လောက် သုံးမယ်ဆိုယင်5MB ခန့်
– Attachment မပါတဲ့ email အစောင် 100 လောက် လက်ခံတာ/ပို့တာအတွက် 2.5 MB ခန့်
– Attachment ပါတဲ့ email 10 စောင်လောက် လက်ခံတာ/ပို့တာအတွက် 18 MB ခန့်
– Web pages 100 လောက် browsing လုပ်ဖို့အတွက် 20 MB ခန့်
– Google maps ကို 10 mins လောက် ဝင်ကြည့်ယင်6MB ခန့်
Data usage ဘယ်လောက်သုံးမလဲ ဆိုတာ video အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ Youtube က4mins စာလောက်ရှိတဲ့ video file ကို ဖွင့်ကြည့်ယင် data usage 11 MB လောက် သုံးမှာဖြစ်ပြီး static image နဲ့ song file ဖွင့်နားထောင်မယ် ဆိုယင်တော့7MB လောက် သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကတော့ 10 mins ကို6MB data usage လောက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုတဲ့ gepgraphic area, zooming, layer toggling တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး data usage ပမာဏ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ပုံမှန်အသုံးပြုတာမျိုး အတွက် (ဓာတ်ပုံတွေ၊ link တွေ ဝင်ကြည့်တာ အပါအဝင်) 15 mins ကို5MB လောက် data usage သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ link က streaming site တွေ ဖြစ်နေခဲ့ယင်တော့ data usage က အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
Applications နဲ့ games တွေ အတွက်ကတော့ ပုံသေသတ်မှတ်ချက် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိထားဖို့ လိုတာက အချို့ applications တွေနဲ့ games တွေဟာ ဖွင့်ထားပြီး အသုံးပြု မနေယင်တောင်မှ နောက်ကွယ်မှာ background services တွေက ဆက်အလုပ်လုပ်နေပြီး data usage တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Data usage ဟာ music track တွေရဲ့ length နဲ့ quality အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ music track တစ်ခုအတွက် data usage5MB လောက် ရှိပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ text အများစုသာ ပါဝင်တဲ့ web page တစ်ခုကို browsing လုပ်ဖို့အတွက် အကြမ်းဖျင်း 0.1 MB လောက် data usage ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံတွေများနေမယ် ဒါမှမဟုတ် flash animation တွေ ပါနေခဲ့မယ် ဆိုယင်တော့ data usage ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
Viber ခေါ်ဆိုမှုအတွက် data usage ကတော့ 240 kbps ဖြစ်ပြီး 1 min ကို 14 MB လောက် ရှိပါတယ်။ Message ပို့မယ်ဆိုယင်တော့ 828 bytes per 500 English characters ဖြစ်ပါတယ်။
Ph Internet သုံးစွဲခကို ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ Volume နဲ့ပြောင်းလဲကောက်ခံမည့် ယာယီဈေးနှုန်း
“ဒါတွေသိမှ Internet ကို ဖုန်းနဲ့ သုံးပါ။ ”
နေ့ လည်တုန်းက ဖက်စ်မြန်မာမိုဘိုင်း က တင်ထားတာ ဖတ်ပြီးကတဲက စိတ်ပျက်နေတာ
ကျုပ်ကတော့ အရင်အတိုင်းပဲ ဆက်ပြီး လုပ်စေချင်တာပဲ ၊ အခုဟာကြီးက ကောင်းမယ်မကောင်းမယ် မသေချာပေမယ့် ပိုက်ဆံကတော့ ခါတိုင်းထက် ပိုကုန်မှာ လုံးဝ ၁၀၀၀၀၀၀% သေချာနေတာကလား
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေ ဆန္ဒဝိုင်းပြရင် ကောင်းမယ်
ခါတိုင်းထက်တော့ ပိုကုန်တယ် မကုန်ဖူးဆိုတာ လူတိုင်း အတွက် မမှန်ပါဖူး………….
တချို့ က Gtalk လေး ပဲသုံးတယ် နောက်ပီး မေးလ်ပဲစစ်တယ်…. ဒီလောက်ပါပဲ…..
တချို့ က Video ကြည့်တယ် Facebook ကြည့်တယ်ပေါ့…….
အဲ့ဒီတော့ ဈေးလျော့ဖို့ လိုတာတော့ အမှန်ပါ…. ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းက မမှားပါဖူး….
ဟုတ်တယ်နော် လွန်ကိုလွန်လွန်းတယ်လေ ထားလိုက်ပါတော့ သူတို့ခေတ်ကိုးဗျ
ဒါဆိုvdo ၃၀ မိနစ်တစ်ခါကြည့် ကို ၁၈၀၀ကျပ် လောက်ကျမှာပေါ့ ။
မောင်ပေ၊ padauk moe၊ ကထူးဆန်း တို့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း တော်တော်စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့တင်လိုက်တာပါ။
data usage 1 MB ကို 100 MB ဆိုပြီး ဖြတ်တာတွေ လာပါလိမ့်အုံးမယ်။
ဦးဦးတို့ကတော့ လောလောဆယ် အဲ့ဒီလိုဝဋ်မျိုးကလွတ်နေတယ်။
အဲဒီသတင်း ကြားလို့ ခု မနက်အစော ကြီး သုံး နေတာ။ နောက် ဆို ဆင်ခြင်သုံးရတော့ မှာမို့ လေ။
မန်းဂေဇက် မှာ ရော စာ သီးသန့် ပို့ ကို တင်ရင်/ဖတ်ရင် ဒေတာ ဘယ်လောက် သုံးလဲ၊ ပုံပါတဲ့ ပို့ တင်ရင်/ကြည့်ရင် ဒေတာ ဘယ်လောက် သုံး လဲ ဆိုတာ လေးပါ လုပ်ပါအုံး။
data ပမာနနဲ့ ငွေကောက်တာကိုတော့ လွန်တယ်မပြောလိုပါဘူး
တချိန်တည်းမှာ ဒေါင်းလုပ်ချရင်း ဘရောက်ဇ် လုပ်နေတဲ့လူက
ဘရောက်ဇ်သက်သက်လုပ်နေတဲ့လူထက် ဆားဗစ်ကို ပိုသုံးစွဲနေတာ မို့
သူများတိုင်းပြည်မှာလည်း သည်လိုပဲ ..ဒေတာပလင်န်တွေနဲ့သွားနေတာပဲဆိုတော့
၂ခုလေးပဲ …အဲ့ဒါကတော့ ၁။ ဈေးနှုန်းပါ .. reasonable price
၂။ service ကောင်းမွန်စေချင်တာပါ..။ 404 တက်နေ အချိန်ပြည့် ဘက်ဘုန်း
ဒေါင်းတယ် အော်နေတဲ့ ဆားဗစ်စ်ကို ဘယ်သူမှ ပိုက်ဆံပေးချင်မှာ မဟုတ်ပါ…
ဟန်းဖုန်း နှင့် အင်တာနက် သုံးချင်ရင်တော့ ဈေးကြီးမိမှာပဲကွယ့် ။
အခုက မြန်မာပြည်မှာ ကောက်ခံတဲ့ ဈေးနှုန်းက ၊
နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ကြည့်ရင် မများလှဘူးကွယ့် ။
အဘတောင် သြဇီမှာ ဟန်းဖုန်း နှင့် အင်တာနက် မသုံးပါဘူး ။
ဈေးကြီးလို့ ၊ မတန်လို့ ။
သိပ်အရေးကြီးမှပဲ ဟန်းဖုန်း နှင့် အင်တာနက် သုံးတယ် ။
ဒီစံနစ်ကို သဘောကျပါတယ်။ သုံးတဲ့သူက သုံးသလောက်ပေးဆိုတာမျိုးကိုး
ဈေးက 100kb ကို ၂ ကျပ်ကတော့ မသင့်ပါဘူး။ သူများနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင်လဲ များနေတယ်။ ဖြစ်သင့်တာနဲ့တွက်ရင်လဲ များလွန်းတယ်။
ကျုပ်အမြင်အရတော့ ဖြစ်သင့်တာက 1Mb ကို ၅ ကျပ်လောက် / ၄ကျပ်လောက် ဖြစ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
ပညာရှင်တွေ ဒုဝန်ကြီး ဖြစ်လာပြီး ထွက်လာတဲ့ ပလင်န်ပါပဲ…
ဖေ့စဘုတ်သုံးရင် တမိနစ် ၁မက်လောက်ကုန်ပါသတဲ့..
ဆိုတော့ တနာရီ မက် ၆၀ .. ပလန်အေနဲ့ဆိုရင် တနာရီ ၁၂၀၀ကျပ်လောက်ကျတော့
အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံး တနာရီ ၄၀၀ ထက် ၃ဆလောက် များတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ …
အဲ … ပလန်ဘီ နဲ့ ဆိုပါစို့ ၂၀၀မက် ဆိုတော့ ၃နာရီကျော်ကျော် … ၁၅၀၀ကျပ် တဲ့
တနာရီ ၄၀၀ကျော် ၅၀၀နီးပါးကျတဲ့ ပလင်န်
ပလန်စီ ပြောင်းရင်တော့ ၁ဂစ်ကို ၇၀၀၀ကျပ် .. ဖေ့စဘုတ် ၁၆နာရီကျော်ကျော်စာ
အဲ့ဒါကို တွက်ရင် တနာရီ ၄၀၀ကျော်ကျမယ်.. အဲ …အဲ့ထက်ကြီးတဲ့ ဒေတာပလင်န်တော့
မရှိတော့ဘူး .. အဲ့ဒါ ထောက်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ပဲ …
ရီဇင်နေဘယ် ပရိုက်ဇ်နဲ့ သုံးလို့ရတဲ့ ပလင်က တလမှ ၁၆နာရီကျော်ကျော်လေးပဲ ပေးသလား..
တနေ့ နာရီဝက် … ဖေ့စဘုတ်သုံးပေါ့ .. ဂလိုလား..
(ဗိုက်ဘာ နဲ့ စကိုက် သူများတူးထားတာတွေ သွား မ ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ…)
What’samegabyte (MB)?
A megabyte isaunit for measuring data. Whenever you send an e-mail, downloadaphoto, or viewaWeb page, your phone is sending or receiving data. When it comes to cell phones, 1 MB of data is equal to roughly one of the tasks below:
• Watching 30 seconds of video on YouTube (Sites like Netflix stream higher quality video, meaning you’ll use even more data)
Below isasampling of typical data plans currently available from wireless carriers.
Plans for feature phones
• $2 per MB pay-per-use
• $10amonth unlimited (must have unlimited messaging plan)
Plans for smart phones
• $20amonth for 300 MB ($20 per 300 MB after)
• $30amonth for3GB ($10 per GB after)
• $50amonth for5GB ($10 per GB after)
• AT&T’s optional Family Share Plans allow data to be shared across multiple devices. Plans range from $40 per month for 1 GB, to $200amonth for 20 GB. These plans are best for families with multiple smartphones and/or tablets.
• $.03 per KB pay-per-use (that’s $30 per MB)
• $20amonth unlimited
• $30amonth unlimited (For $20 to $50, Sprint cutomers can tether their smartphone to other devices, likealaptop, and use up to2GB or6GB of data, respectively.)
• $1.99 per MB pay-per-use
• $20amonth for2GB
• $30amonth for unlimited
• For an additional $30amonth,afeature phone customer can upgradea700-minute voice plan toaplan that includes unlimited talk, text and 300 MB of shareable data.
Verizon’s “Share Everything” plans allow data to be shared across multiple devices. The plans include:
• $50amonth for 1 GB ($15 per GB after)
• $60amonth for2GB ($15 per GB after)
• $70amonth for4GB ($15 per GB after)
• $80amonth for6GB ($15 per GB after)
• $90amonth for 8 GB ($15 per GB after)
• $100amonth for 10 GB ($15 per GB after)
အပေါ်ကဟာကတော့.. ဘီလီယံရာဂဏန်းမက.အကုန်အကျခံထားတဲ့.. အင်ဖရာစရပ်ချာပေါ်က… ဒေတာပလင်န်တွေပါ…
သောက်တုပ်တွေတော့ ပလုပ်ကုန်ပြီ။ လူတွေအင်တာနက် မသုံးအောင် ဈေးမြှင့်ချလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒင်းတို့ မသိနေတာမှ မဟုတ်တာ။ မင်းတို့ကို လဗြွတ်လို့ ထင်တယ်ကွလို့ ပြလိုက်တာ… ဝိုင်းဆဲရင်ဆဲ မဆဲရင် ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုက်က တက်လာတဲ့ အလန်းလေးတွေ နင်တို့ ငတ်ပြီမှတ်…။
အပေါ်က သဂျီးပြောတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက 3g 4g ကွန်နက်ရှင်အပြည့် ဈေးတွေပါ။ မြန်မာပြည်မှာလို အင်ဂျီးမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ နေရာတိုင်းမှာ ကေဘယ်လ် အင်တာနက် (တီဗွီပါ၊ မပါ)၊ တယ်လီဖုံးလိုင်းဒီအက်စ်အယ်လ် လည်းအလွယ်တကူ တပ်လို့ရတယ်။ ဒီအတိုင်းဆို အိမ်နဲ့ဗိုင်ပါ ပြောတဲ့အခါ စကားလုံး ကြိုကျက်ထားရမယ်။ ဒါမှ မြန်မြန်ပြီးမှာ… :eee:
ခါတိုင်း ပျင်းလို့ ရှိရင်
ပြည်သူများ သက်သာစေရန် မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခပြောင်းလဲခြင်းဟု ဆက်သွယ်ရေးရှင်းလင်း
by Myit Makha Mediagroup on 28 Nov, 2012 မှကောက်နုတ်ချက်
သုံးစွဲသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ Facebook သုံးမည်ဆိုလျှင်ပင် မိမိWall ပေါ်တွင် တင်ထားသော ပုံများ၊ စာများဖော်ပြပေးသည်ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်မိနစ်လျှင် 1 MB နှုန်း data အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် ဖုန်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀ ကျပ် ကျပြီး နာရီဝက်ခန့် Facebook အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်ပင် (၆၀၀)ကျပ်ခန့် ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် Viber အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် 240 KB နှုန်း data အသုံးပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့်
တစ်မိနစ် လျှင် (၅)ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး Skype နှင့် Video Call အသုံးပြုမည်ဆိုပါက
တစ်မိနစ်လျှင်6MB နှုန်း data သုံးမည်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်မိနစ်လျှင် ၁၂၀ ကျ သင့်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အပြင်မှာ ပြောနေကြတာတွေက မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူတွေကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။ တကယ်တမ်းက ကျွန်တော်တို့ ပြပေးတဲ့ Plan B နဲ့ Plan C ဟာ ဆိုရင် အများကြီး သက်သာအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။ လေးသောင်းလောက် ကျမယ့်ဟာကို ၇၀၀၀ လောက်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ၊ ပြီးတော့ Facebook သုံးရင်လည်း နာရီဝက် ၆၀၀ ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ Facebook အသုံးပြုသူတွေက 100 MB ထက် ကျော်ပြီးတော့ သုံးကြမှာလား၊ ဘယ်လိုမှ မကျော်ပါဘူး” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဌေးဝင်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Facebook မှ comment အချို့ 
Lu Yichun အင်ချုပ် ရေ ခင်ဗျားအဖေ fb က စာတွေကြည့်ဟုတ်ဘူးဗျ။ ပုံတွေ ။
ဗီဒီယိုတွေလည်းပါတယ်…နောက်ပီး refresh ကခဏခဏ လုပ်၇တာဗျ
လရောင် သာ facebook ကော သုံးဖူးရဲ့လား
Win Htike 1 GB ၇၀၀၀ plan ကတော့ တန်သား။ အဲဒါဆိုလဲ 100 KB ၂ ကျပ်နဲ့ မကောက်နဲ့..
အရင်လို မိနစ်နဲ့ ဆက်ကောက်။ ဒါဆို 1GB ၇၀၀၀ plan ကို လူပိုသုံးလိမ့်မယ်။
အခု 1 MB ၂၀ ကတော့ များလွန်းတယ်လေ..အခုမြန်နှုန်းက ၁ မိနစ် 1 MB ဒေါင်းလို့ ရတယ်။
၁ မိနစ်မှ ၂ ကျပ်ရယ်။ ၁၀ ဆများတယ်။ သေချာ pricing ကို ပြန်ညှိပေးပါဦး။
Demo Katkatlan ဒီ့ထက်ပိုတိတိကျကျ ရှင်းစေလိုပါတယ် ခုက မရှင်းပါဘူး
လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတော့ ဒီလိုတွေပြောနေကြတယ်ဗျ
Sai Han Thet Oo
ဖုန်းနဲ့ Computer ချိတ်ပြီး ၃ နာရီတိတိ စမ်းသုံးကြည့်ပါတယ်
ျှ Update တွေပိတ်ထားပါတယ်
Facebook သုံးတယ် Torn City ဆော့တယ် တခြား Online Text Mode Game တစ်ခုဆော့တယ်
Gmail စစ်တယ် Facebook မှာ သတင်းအကုန်ဖတ်တယ် ပုံတွေကြည့်တယ် ဟိုဟိုဒီဒီ အကုန်ဝင်ကြည့်တယ်
ဘာ Download မှ မလုပ်ပါဘူး အရင်သုံးနေကျ ပုံစမ်းအတိုင်းပါပဲ
ပြီး Data Usage ကိုစစ်ကြည့်တယ် လားလား 70 Mb (၁၄၀၀ ကျပ်) တောင် ၀ိုး ….. ခုလောလောဆယ် ၁ မိနစ် ၂ ကျပ်မို့ ၃၆၀ ကျပ်ပဲကုန်တယ်
ခုစမ်းရင်နဲ့ထူးထူးခြားခြားတွေ့တာပြောရမယ်ဆိုရင် Phone OS Services ကနောက်ကွယ်ကနေ ဆွဲနေတာ ၁ နာရီလောက်အတွင်းမှာ9Mb (၁၈၀ ကျပ်) လောက်ဆွဲသွားပါတယ်
Settings -> Applications -> Running services မှာ နောက်ကွယ်က Run နေတဲ့ services တွေရှိပါတယ်
ကိုယ်အတွက်မလို့တဲ့ဟာတွေ Stop လုပ်ပေးပါ
ပြီး Settings -> Account and Sync ကနေ မလိုရင် Sync လုပ်နေတာကို ပိတ်ထားပေးပါ
Facebook ကတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ် ဘာမှ သိပ်မကြည့်ရသေးဘူး
News Feed ကနေ အပေါ်အောက် ခဏလေးဆွဲလိုက်သေးတယ်3Mb (၆၀ ကျပ်) တဲ့ အသာလေးပဲ
Gtalk ကတော့ သာယာတယ် တစ်နာရီလောက်ဖွင့်ထားလဲ စကားအပြောအဆို သိပ်မလုပ်ရင် Kb အနည်းသာကုန်တယ်
Gmail ရောပဲ Download မလုပ်ရင် သိပ်မကုန်လှပါဘူး
နောက်အဆိုးဆုံးကတော့ YouTube ပါပဲ ဘာရယ်မဟုတ် သွားမနှိပ်ကြည့်ပါနဲ့ နောက်နေ့ကုန်းကောက်စရာတောင်ကျန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ခုတော့ ဒီလောက်အထိပဲ စမ်းရသေးတယ် နောက်သိရင်သိသလိုဒီ Post အောက်မှာရေးပေးသွားမယ်
နောက်အရေးကြီးတာ တစ်ခုရှိပါတယ် ဖုန်းနဲ့ Computer ချိတ်သူများပိုပြီးအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်
Computer ကနေ နောက်ကွယ်ကနေ Window Update, Antivirus Software Update, တခြား Software ဟာနောက်ကွယ်ကနေ အင်တာနက်မိပြီးဆိုတာနဲ့ အမြဲတန်းလိုလို Update ဆွဲနေတတ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ကိုယ်လက်လမ်းမှီသမျှ Update တွေကို ပိတ်ထားပေးစေချင်ပါတယ် တချို့ Software တွေဟာ Mb ကြီးကြီးတွေနောက်ကွယ်ကနေ ဆွဲချနေတတ်လို့ပါပဲ
Window7သုံးတဲ့သူတွေ ပိုသတိထားသင့်ပါတယ်
နောက် စမ်းဖြစ်တာက Viber ပါ Viber နဲ့ သိတဲ့သူတွေ့စမ်းခေါ်ပြီး စကားပြောကြည့်ပါတယ် ၃ ယောက်ကိုခေါ်ပါတယ် တစ်ယောက်ကို ၃ မိနစ်ကျော်လောက်စကားပြောဖြစ်ပါတယ်
စုစုပေါင်း Viber နဲ့ ၁၀ မိနစ်ကျော်လောက် ပြောလိုက်ပါတယ်
ထူးစမ်းစွာ တွေ့လိုက်ရတာကတော့ Viber နဲ့ ၁၀ မိနစ်ကျော်လောက်ပြောတာတောင် 18 Kb ပဲကုန်ပါတယ် <- (100 Kb မှ2ကျပ် ဆို့တော့ ပြားစွန်လောက်ပဲကျတာပေါ့)
သူများတွေ တွက်ထားသလောက် ၁ မိနစ် ၅ ကျပ်လောက်ကုန်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်စမ်းတာတော့မကုန်ကြောင်းပါ
မှတ်ချက် – Viber နဲ့ပြောတဲ့အချိန် Connection သိပ်မကောင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ အသံတိုးတာကလွှဲလို့ ကြားရပါတယ်
Video Call တော့ ခေါ်ရမဲ့သူမရှိတာရယ် Connection မကောင်းတာကြောင့် မစမ်းရသေးပါဘူး
iPhone44s 5, Samsung II III, Sony, HTC စတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Smart ဖုန်းကောင်းကောင်းကိုင်သူများ
iPad, Samsung Note, တခြား Version မြင့်မြင့် စတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Tablet ကောင်းကောင်းကိုင်သူများ
အတွက် ခု MPT က သတ်မှတ်တဲ့ Internet သုံးတဲ့နှုန်းနဲ့ဆိုရင် တကယ် တကယ် သတင်းဆိုးကြီးပါပဲ
ခုနောက်ဆုံးပေါ်တွေက Internet ကနေ Update တွေ Firmware တွေ Resource တွေကိုတော်တော်များများ ဆွဲပါတယ်
ပြီးဆွဲအားလဲကောင်းသလို 3G ကလေး On လိုက်တာနဲ့ နောက်ကွယ်က Application, Game နဲ့ OS Services တွေဟာ သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ဆွဲတော့တာပါပဲ
နောက်ဖြစ်လာနိုင်တာက ဈေးကြီးသွားတဲ့အတွက် ဖုန်းအင်တာနက်ကို သုံးမဲ့သူနည်းသွားတဲ့အတွက် ခုထက်တော့ လိုင်းပိုမြန်လာမယ်ထင်ပါတယ် (အနည်းငယ်ပိုမြန်လာမှာတော့ သေချာပါတယ်)
ဒါကြောင့် လိုင်းကလေး မြန်မြန်နဲ့ နောက်ကွယ်က Application နဲ့ OS Services တွေဆွဲချက်က ၁၀ မိနစ်လောက်အတွင်း Mb တော်တော်များများကုန်သွားမှာပါ
ကျွန်တော် စမ်းကြည့်သလောက် လိုင်းသိပ်မမြန်တဲ့အချိန်မှာတောင် Smart ဖုန်းဟာ တစ်နာရီလောက်အတွင်းကို 15 Mb (300 ကျပ်) လောက်ဆွဲသွားပါတယ်
ရိုးရိုးသာမန် ဖုန်း OS Android 2.2 ကတော့ ၃ နာရီလောက်အတွင်းမှာ2Mb (40 ကျပ်) လောက်သာဆွဲသွားပါတယ်
ဒါကြောင့် OS Version နိမ့်နိမ့် Application and Game နည်းနည်းလောက်သာရှိတဲ့ ဖုန်းမျိုးဝယ်သုံးမှ ပိုကိုက်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါပြီ
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အကောင်းစား Smart ဖုန်းကိုင်သောသူများ သွေးမပျက်ချင်ရင် ရှိသမျှ Internet Update ဆွဲမဲ့ အပေါက်သာအကုန်ပိတ်ပေးတော့ဗျာ
Google News, Yahoo News, MSN News စတဲ့နောက်ကွယ်က Auto Update လုပ်တဲ့ဟာတွေ ပိတ်ထားလိုက်ပါ (ဘာသတင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိချင်မှဖွင့်ဖတ်ပါ)
Stock ဈေးအတက်အကျ ရွှေဈေး ရေနံဈေး Exchange ဈေး စတဲ့ဟာတွေ ကြည့်မနေနဲ့တော့ (ကျွန်တော်တို့လို့ လူတန်းစားအတွက် သိပ်မသက်ဆိုင်သလိုပဲ)
ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်မြို့မှာ ဘယ်ရာသီဥတု ဖြစ်နေသလဲ သိချင်မနေနဲ့တော့ သူများမြို့မှာ ဘယ်အချိန်ရှိရှိ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး (ကိုယ်နေတဲ့နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေတာသိရင်ရပြီး)
အလကားပို့ပေးမယ် ဘာညာဆိုပြီး ကြော်ငြာများများပို့ပေးတဲ့ Application တွေ Uninstall လုပ်လိုက်တော့
မဖြစ်စလောက်ရတဲ့ ကိုယ် Game Score တွေ Online မှာ သွားမကြွားနဲ့တော့
Internet Connect ဖြစ်မှဖွင့်လို့ရမယ် ဆော့လို့ရမဲ့ Application တွေ Game တွေ မလိုအပ်ရင် Uninstall လုပ်လိုက်တော့
ဟိုသွားဒီသွားရင် GPS နဲ့ Online Map တွေအားကိုးမနေနဲ့တော့ (သွားချင်တဲ့နေရာကို သိတဲ့သူများကိုမေးပါ Offline Map ကိုသာသုံးပါ)
လျှောက်သွားရင် ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို Up to date Share မလုပ်နဲ့တော့ (Free Wifi ရတဲ့နေရာရောက်မှ အမုန်း Share တော့)
Advanced Task Killer လို့ Application လေးတွေတင်ထားပေးပါ သတိရတိုင်း ထိုင် Kill နေပါ (တချို့ Application ဟာ ပိတ်လိုက်ပေ့မဲ့ နောက်ကွယ်မှာ Run နေတတ်ပြီး Internet Connection ကနေမသိမသာလေးဆွဲနေတတ်ပါတယ်)
Auto Refresh ဖြစ်တဲ့ Web Site တွေကြည့်ပြီး ဒီအတိုင်းဖွင့်မထားပါနဲ့
Connection မကောင်းလို့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Page အားလုံးမပေါ်သေးတာကို ဒေါသ တကြီး Refresh ထပ်ထပ်မနှိပ်ပါနဲ့ (Refresh ဖြစ်တိုင်း Data Usage တက်တက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
3G ဖွင့်ထားပေးမဲ့ Internet မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် Data Usage မတက်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောပြော အကောင်းဆုံးကတော့ 3G မသုံးတော့ရင် ပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ
Hawdeka Khalaylay မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်သုံးစွဲခ ဈေးတက်ရန် ပြည်ဖျက်သန်းရွှေ အမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့ဟုဆို
ဒီဇင်ဘာလက စပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်သုံးစွဲခကို အဆပေါင်းများစွား တိုးလိုက်ဖို့ ပြည်ဖျက်သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ် ။
၁၂ မယ်ဂါပစ်ဇယ်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ အနည်းဆုံး ၅မက် ရှိလို့ ဈေးအသစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် တစ်ပုံကို ၁၀၀ကျပ်နှုန်းကျပါမယ်
တစ်လကို ကျပ်သုံးသောင်းစရိတ်ငြိမ်းရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် အင်တာနက် နဲ့ ဓါတ်ပုံလှမ်းပို့မယ်ဆိုရင် တစ်ရက် ၁၀ပုံ ပိုရုံနဲ့တင် သူ့လစာ ပြောင်သွားနိုင်ပါတယ် ၊
အခုလိုဈေးတက်လာတာကတော့ အီရန်က နေစလိုက်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုံး ဖေ့ဘုတ် သတင်းပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ပါပဲ . . မိုဘိုင်းဖုန်းကတဆင့် မတရားမှုတွေကို ချက်ချင်းဆိုသလို ဓါတ်ပုံတွေရိုက် ဗီဒီယိုတွေ
ရိုက်ပြီး ဟန်းဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်တင်လို့ အားလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားရင် ခရိုနီတစ်ပိုင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့ ဗမာအစိုးရအတွက် ပီကင်းတရုတ်ကြီးနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ဗမာပြေကို ဖဲ့ရောင်းထားတာတွေ
အဲဒီ ဟန်းဖုန်းတွေ အထောက်အကုပြုမှုကြောင့် အာရပ်ပြေက သက်တော်ရှည်အာဏာရှင်အစိုးရတွေ ဗုံးဗုံးလဲခဲ့ကြတာဟာ လက်တွေ့သာဓကတစ်ခုပါပဲ . . .
ဗမာပြေက ခရိုနီတစ်ပိုင်းအစိုးရဟာ တစ်ခုခုဈေးတက်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကို လက်ညှိုးထိုးပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ဒီဈေးနဲ့ပဲ ရောင်းဝယ်နေသလိုလို ဝါဒဖြန့်မှိုင်းတိုက်တတ်ကြပါတယ် ၊
အခုသတ်မှတ်မယ့် ၁မက်ဂါဗိုက် ကိ ဗမာငွေ ၂၀ ဆိုတာကိုလည်း ကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ညှိထားသလိုလို ပြောအုံးမှာပဲ . . .
နမုနာတစ်ခုပြောချင်ပါတယ် . . မက်ဒေါ်နယ်ဘာဂါကို လူတိုင်းကြားဖူးကြမှာပါ . . ဒီမှာရောက်နေသူတွေ အားလုံးစားဖူးကြပါတယ် . . .
မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်ခွဲတွေ ကမ္ဘာ အနှံ့မှာ ဖွင့်ထားပါတယ် . . .
မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ဘာဂါဟာ အမြန်စားအလွယ်အစားအစာတစ်ခုပါ . . လမ်းဘေး သွားရေစာတစ်ခုပါ . . . မက်ဒေါ်နယ်ကုပ္မဏီဟာ အမြတ်ဦးစားပေးတဲ့ စီပွားရေးအဖွဲ့တစ်ခုပါ . . .
ဒါပေမယ့် မက်ဒေါ်နယ်ဘာဂါတစ်ကို ဈေးသတ်မှတ်ရာမှာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူကြပါဘူး . . .
အဲဒီနိုင်ငံ အဲဒီဒေသရဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ တစ်နာရီလုပ်အားခနဲ့ ယှဉ်တွဲတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ် . . .
အမေရိကန်မှာ ၄.၂ ဒေါ်လာပေးရတဲ့ ဘာဂါတစ်ခုဟာ ဒိန်းမတ်မှာ ၅.၃၇ နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်မှာ ၆.၈၁ဒေါ်လာ ဈေးရှိပြီး၊ ယိုးဒယားမှာကျတော့ ၂.၄၆ နဲ့ အိန္ဒယမှာကျတော့ ၁.၆၂ ဒေါ်လာ ပဲရှိပါတယ် . .
ဗမာပြေဟာ အခုအချိန်မှာ ခရိုနီတွေ ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ အဖက်ဖက်က နောက်ကျနေချိန်မှာ ဗမာပြေကြီး အမြန်ခေတ်မှီဖို့ ဗမာပြေသားတွေ အမြန်ပညာတတ်တွေ ဖြစ်ဖို့ အခရာကျနေတဲ့ အင်တာနက်ကို
ဘယ်လောက်သတ်မှတ်သင့်ပါသလဲလို့ အားလုံးဝိုင်းဆွေးနွေးပေးကြပါလားဗျာ . . .
ဖတ်ပြီးသားတွေဆိုရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ….
ဆဲလ်ဖုံးတလုံး.. အင်တာနက်ရဖို့ဆိုတာ.. ကြားထဲ..တာဝါတွေ.. ကွန်ပျူတာတွေ.. ဒေတာစင်တာတွေ.. ကြိုးလိုင်းတွေ.. အဲဒါတွေထားဖို့..ဆောက်ဖို့.. မြေကြီးတွေ.. ကြိုးလိုင်းတွေ.. အများကြီးလိုတာပါ…
အင်ဖရာစရပ်ချမပြည့်စုံ.. လိုအပ်ချက်ကြောင့်.. ပြီးခဲတဲ့.. ၄လလောက်က.. အိန္ဒိယမှာ.. ပြည်တခြမ်းလောက်အမှောင်ကျတယ်..။ မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့.. ၁၀ဆ..လူသန်း၆၀၀ကျော်.. လူတွေ.. လျှပ်စစ်မီးပြတ်တယ်..။
The July 2012 India blackout was the largest power outage in history, occurring as two separate events on 30 and 31 July 2012. The outage affected over 620 million people, about 9% of the world population,
ပြန်ပြင်တည်ဆောက်ဖို့.. ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁ထောင်လောက်သုံးရပါမယ်တဲ့..
India’s Power Grid Collapses – WSJ.com
Jul 31, 2012 – A second big blackout in as many days left areas of India inhabited by 680 … including promises to spend $1 trillion on infrastructure projects by 2017. … have left state utilities with billions of dollars of accumulated losses.
ဆိုတော့.. မြန်မာပြည်မြေကြီးဈေးနဲ့.. ဘာမှမရှိတဲ့.. အင်ဖရာစရပ်ချာနဲ့.. ဟောင်းနွမ်းသုံးမရတဲ့..လိုင်းတွေနဲ့.. လူတွေ..အလုပ်သမားတွေ.. အကျင့်တွေ.. ရှိပုံနဲ့.. နိုင်ဂျံဂါး. ရင်းနှိးမြုတ်နှံသူတွေလည်း.. ခေါင်းကုတ်..ဖင်ကုတ်နဲ့.. လစ်ကုန်ပြီ..
ကော်မန့်ရေး ရင် …ကောင်းကောင်းရေးပါဗျ…
ကလိသလိုလို ရိသလိုလို ..လုပ်တဲ့ ဇရိုက်အို အကျင့်ဟောင်းက
ဆြာနေမျိုးဝေတို့ စန္ဒာပြမလို့ …အချိန်းအချက်စာတွေ
တွေ့မိလို့ … စိတ်ထိခိယက်နေရပါတယ်ဆိုမှ….
ဖေ့စဘုတ်ကြီး ဘန်းခံထိမှာတော့ မြင်ယောင်သေးတော့တယ်…
အိုဘယ့် ၂၀၁၂ ရဲ့ ဒီမိုအကျဆုံးတိုင်းပီ…
အမှန်တော့ နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ရင် သိပ်မများပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေမှာလဲ ဝင်ငွေ နဲတဲ့အခါ ၊
အခုနှုန်းထက် နဲနဲတော့ လျော့သင့်ပါတယ် ။
cdma800ကိုကွန်ပြူတာနဲ့ တွဲသုံးတယ်
1 B(captial B Byte) မှာ 8 b(SmallbBit) ရှိပါတယ်
1 KB = 8 Kb ပါ
ခုလက်ရှိ တစ်မိနစ် ၂ကျပ်လိုင်းတွေက အမြန်နှုန်း(Bandwidth) 256 Kb/s ပေးထားပါတယ်
Byte ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 32 KB/s ရှိပါတယ်
တစ်စက္ကန့်(1 second) ကို 32 KB နှုန်းနဲ့ Data အသွားအပြန်လုပ်ပါတယ်
ဒီတော့ တစ်မိနစ် (1 minute) ကို 32 KB*60 = 1920 KB Data အသွားအပြန်လုပ်ပါတယ်
ခုနှုန်းထားအရဆိုရင် 100 KB ကို ၂ကျပ်ပါ
1920 KB အတွက်ဆိုရင် 19.2(1920 KB/100 KB)*2 = ၃၈.၄ကျပ်ပေးရပါတော့မယ်
ဒါဟာသက်သာတာလား ဈေးကြီးသွားတာလား စဉ်းစားကြပါ
လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ အင်တာနက် နှုန်းထားများကို GSM ဖုန်းဆိုလျှင် တစ်မိနစ် ၂ ကျပ်နှုန်းနှင့်
WCDMA နှင့် CDMA 800 MHz ဖုန်းများဆိုလျှင် တစ်မိနစ်ကို (per minute) ၄ ကျပ်နှုန်းဖြင့်
ကောက်ခံနေရာမှ ယခုအခါ data usage plan အပေါ် အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည်ဟု
အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေရာ ယင်းအပေါ် ပြည်သူများ အကြားတွင်
ကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်သူရိန်ထွန်းက “လောလောဆယ်က သူတို့က ယာယီဈေးနှုန်းလို့တော့ ပြောထားတယ်ပေါ့။
ယာယီဈေးနှုန်း အရတော့ အတော့်ကို များပါတယ်။
India ၏ Airtel ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ 3G အင်တာနက်ဈေးနှုန်းက 10GB ကို လစဉ်ကြေး ရူပီး ၁၅၀၀ ပေးရပါတယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ဝန်းကျင် ကျသင့်ပါတယ်။
တွက်ချက်ကြည့်ရင် 1GB ကို နှစ်ထောင့်နှစ်ရာဝန်းကျင် ကျသင့်ပါတယ်။
အခု MPT က 2GB ကို ၇၀၀၀ ဆိုတော့ 10GB ဆိုရင် သုံးသောင်းခွဲတော့ ကျပါတယ်။
ဒါကလဲ အခုလေးတင် ပြောင်းသွားတဲ့ဈေးပါ။
အခု skynet ကနေ လွှင့်ပေးနေတာတော့ တွေ့ရပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ သုံးသပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
အရင်မိနစ်နဲ့ ကောက်တဲ့စနစ်နဲ့ တွက်ချက်ကြည့်ရင် 1MB ကို တစ်ကျပ်နှုန်းကောက်မှ အရင်နှုန်းနဲ့ တူမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ http://www.myanmarmobileapp.com ၏ ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် သုံးစွဲသူ ပြည်သူများက ယင်းနှုန်းထားနှင့်သာ ကောက်ခံမည်ဆိုပါက ယင်းကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြု ရေးသားထားကြသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နောက်ဆုံးတော့ လမ်းထိပ်က အင်တာနက် ဆိုင်လေးသည်သာ အကောင်းဆုံး… Huuuuuuu HUuuuu…
ဖွတ်ချပ် ဖွတ်ချပ် …
မိုဘိုင်း ကိုးနတ်ရှင်လောက်နဲ့ ..
ဒီဈေးအတိုင်း ကောက်တော့ ..